Raha mpamaky ny tranokalako efa ela ianao dia fantatrao fa faly be aho mahita ireo kara-pifandraisana isan-karazany. Manana karatra fanamarihana paositra aho, karatra toradroa, karatra metaly, karatra misy laminy… Ankafiziko tokoa. Mazava ho azy, miaraka amin'ny hidin-trano sy ny tsy fahafahany mandeha, tsy dia nilaina loatra ny karatra fandraharahana. Ankehitriny dia misokatra ny dia, na izany aza, nanapa-kevitra aho fa tonga ny fotoana hanavaozana ny karako ary hakako araka ny filaharany.
Tsy manolotra ny karatra premium novidiko fotsiny i Linq, fa tena manana safidy betsaka azo isafidianana izy ireo:
Fantaro bebe kokoa ny momba ny vokatra sy ny tolotra nataon'i Linq ao amin'ny magazay an-tserasera:
Tags: Androidkaratra fandraharahanacashappkaratra fifandraisanafifandraisana rakitracontact informationiPhone iosdinganalinqlinq pronfcbandy paoma nfcnfc fehin-tànanakaratra orinasa nfckaratra orinasa nfcbokotra nfcho avy